Puntland oo Soo Dhawaysay Saraakiil iyo Askar Ka soo goosatay Somaliland • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Puntland oo Soo Dhawaysay Saraakiil iyo Askar Ka soo goosatay Somaliland
Puntland oo Soo Dhawaysay Saraakiil iyo Askar Ka soo goosatay Somaliland
May 30, 2019 - By: HORSEED STAFF
Degaanka Balibusle ee gobolka Sanaag waxaa maanta lagu soo dhaweeyay Saraakiil iyo boqolaal ciidamo oo hore uga tirsanaa ciidamada maamulka Somaliland ee gobolka Sanaag.
Bidix, Xuseen, Dhexda, Col Cashuur iyo Taliye Xayle
Ciidamada ka soo goostay Somaliland oo tiradooda aan la shaacin, waxaa hoggaaminaya Labo Taliye oo kala Xayle Xaaji Diraac iyo Xuseen Dheere.
Degaanka Balibusle waxaa haatan ku sugan Gudoomiyaha Gollaha wakiiladda Dowladda Puntland oo hogaaminaya wafdi balaaran oo ka socda Dowladda Puntland oo ka kooban Wasiiro,Xildhibaano iyo Talliyaal ciidan. waxaa hore gobolka Sanaag ugu sugnaa wasiirka amniga Puntland C/samad Maxamed Galan iyo taliyaha ciidamada Booliiska Puntland Gen Muxiyadiin Axmed Muuse
Dhinaca kale, Gudoomiyihii degmada Badhan ee Maamulka Soomaaliland Cali Xuseen (Soomaali) ayaa iska casilay xilkii uu maamulka Hargeysa wuxuuna sheegay inuu Dowladda Puntland iyo shacabka gobolka Sanaag kula biiray difaaca Dalka.
Toddobaadkii hore, waxaa degaanka Damale xagare ka dhacay dagaal u dhexeeyay ciidamo somaliland taageersan iyo ciidamo uu watay wasiirka waxbarashada Puntland oo xiligaa kormeer ku marayay gobolka, Dagaalkaasi waxaa ku dhintay ilaa lix qof.
Maamulka Somaliland weli kama hadlin, Askarta iyo saraakiisha ka soo goosatay ciidamadooda fadhiyay gobolka Sanaag.